सेयर बजार(Stock Market)
काठमाण्डौ । साताको पहिलो कारोबार दिन आज दुवै बीमा उपसूचकमा गिरावट आएको छ। आज निर्जीवन बीमा उपसूचक १५४.८३ अंकले घट्दै ७८९२.४३ बिन्दुमा सीमित भयो। यो दिन जीवन बीमा उपसूचक पनि १२२.६८ अंकले घट्दै ९१४४.०८ बिन्दुमा झर्यो। आज सबैभन्दा धेरै कमाउने शीर्ष १० कम्पनीको सूचीमा आज एउटा मात्रै बीमा कम्पनीले आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सफल भयो। आज प्रभु...
काठमाण्डौ । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । कम्पनीको संस्थापक सेयरधनीको नाममा रहेको १२ हजार ५०० कित्ता सेयर आज(असार ५ गते)देखि बिक्रीमा राखिएको हो । यो सेयर खरिदका लागि कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरुले मात्रै आवेदन दिन सक्नेछन् । सेयरको न्यूनतम मूल्य भने निर्धारण गरिएको छैन । सेयर...
काठमाण्डौ । आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने आज(असार ५ गते)अन्तिम दिन रहेको छ । संस्थाले गत असार १ गतेदेखि आम सर्वसाधारणका लागि ६७ लाख रुपैयाँबराबरको रु. १०० अंकित दरका ६७ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । निष्कासन गरिएको कुल सेयरमध्ये ०.५ प्रतिशत अर्थात १ लाख ३५ हजार कित्ता कर्मचारीहरुका लागि र ५...
काठमाण्डौ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी(नेपाल)लिमिटेडको संस्थागत समूहको ५ लाख कित्ता बढी सेयर आज(असार २ गते)देखि लिलामीमा राखिएको छ। कम्पनीको संस्थागत समूहको ५ लाख ३८ हजार ९६५ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको हो। यो सेयर खरिदका लागि विद्यमान संस्थापकहरु वा जो कोहि व्यक्ति, कम्पनी, तथा संघ संस्थाहरुले बोलपत्र आवेदन पेश गर्न...
काठमाण्डौ । सानिमा बैंक लिमिटेडले आगामी असार १० गतेदेखि ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ५० लाख कित्ता भएको ५ वर्षे अवधिको ‘१०.२५ प्रतिशत सानिमा डिबेन्चर २०८९’नामक ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो । कुल निष्कासनमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात ३० लाख इकाइ व्यक्तिगत तवरबाट र बाकीँ...
काठमाण्डौ । सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेडले आज(असार २ गते)देखि आईपीओ निष्कासन गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्र बाग्लुङ जिल्ला ताराखोला गाउँपालिका र गल्कोट नगरपालिकामा स्थायी बसोबास गर्ने बासिन्दाहरुका लागि रु.१०० अंकित दरका ३ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको हो । लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतममा ३० हजार कित्ता...
काठमाण्डौ । साताको तेस्रो कारोबार दिन आज दुवै बीमा उपसूचकमा गिरावट आएको छ। आज जीवन बीमा उपसूचक १८९.५८ अंकले घट्दै ९२६४.७३ बिन्दुमा सीमित भयो। यो दिन निर्जीवन बीमा उपसूचक पनि १३४.२७ अंकले घट्दै ८०३१.८३ बिन्दुमा सीमित भयो। आज सबैभन्दा धेरै कमाउने शीर्ष १० कम्पनीको सूचीमा कुनै पनि बीमा कम्पनीले आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सकेनन्...
एनसीसी बैंकको संस्थापक सेयर लिलामीमा
काठमाण्डौ । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक(एनसीसी) लिमिटेडले संस्थापक समूहको सेयर लिलामीमा राखेको छ । बैंकले आज(असार १ गते)गतेदेखि संस्थापक सेयरधनी कम्पनीको नाममा रहेको २६ लाख ३४ हजार १३६ कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको हो । लिलामी सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता १४२ रुपैयाँ तोकिएको छ । लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम १००० कित्ताका लागि आवेदन...
‘एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड’का इकाइहरुको बाँडफाँड सम्पन्न
काठमाण्डौ । एनआईसी एशिया म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने ‘एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड’का इकाइहरुको बाँडफाँड गरिएको छ । गत जेठ १९ गतेदेखि २५ गतेसम्म बिक्री खुला गरिएको ‘एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड’का इकाइहरुको बाँडफाँड(बीजपूँजी समेत) जेठ ३१ गते गरिएको हो । उक्त बाडँफाँड सम्बन्धि विवरण सीडीएस एण्ड क्लियरिङ...
मन्दाकिनी हाइड्रोपावरको आईपीओमा आवेदन खुला
काठमाण्डौ । मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आज(असार १ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्र कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउपालिका वडा न.२,३,४ र ६(साविक सार्दिखोला गाविस घाचोक गाविस,लाहाचोक गाविस र धिताल गाविसका बासिन्दाहरुका लागि रु.१०० अंकित दरका ५ लाख ८८ हजार ०३७ कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको हो �...
काठमाण्डौ । आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आज(असार १ गते)देखि आईपीओ निष्कासन गरेको छ । संस्थाले आम सर्वसाधारणका लागि ६७ लाख रुपैयाँबराबरको रु. १०० अंकित दरका ६७ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको हो । निष्कासन गरिएको कुल सेयरमध्ये ०.५ प्रतिशत अर्थात १ लाख ३५ हजार कित्ता कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात ३ हजार ३५० कित्ता...
परिसूचक २ हजार बिन्दु तल,बीमातर्फ सगरमाथा इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य सर्वाधिक घट्यो
काठमाण्डौ । साताको दोस्रो कारोबार दिन आज दुवै बीमा उपसूचकमा गिरावट आएको छ। आज निर्जीवन बीमा उपसूचक २४२.७ अंकले घट्दै ८१६६.१३ बिन्दुमा सीमित भयो। यो दिन जीवन बीमा उपसूचक पनि १८६.८८ अंकले ओरालो लाग्दै ९४५४.३१ बिन्दुमा खुम्चियो। आज सबैभन्दा धेरै कमाउने शीर्ष १० कम्पनीको सूचीमा कुनै पनि बीमा कम्पनीले आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न स...
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकद्वारा लाभांस प्रस्ताव
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको छ। बैंकको जेठ ३० गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको हो। बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ सम्मको वितरण योग्य मुनाफाबाट ८.५० प्रतिशत बोनस सेयर र ०.४५ प्रतिशत नगद लाभांस गरी कुल ८.९५ प्रतिशत लाभांस वितरणको...
पिपुल्स पावरले असार ८ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने
काठमाण्डौ । पिपुल्स पावर लिमिटेडले आगामी असार ८ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्र इलाम जिल्ला इलाम नगरपालिका वडा न.१ र ४ अति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुका लागि १ लाख ८९ हजार ७८० कित्ता र इलाम नगरपालिका वडा न.१ र ४ बाहेकको इलाम जिल्लाका बासिन्दाका लागि ४ लाख ४२ हजार ८२० कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न...
शिखर इन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर सेयरधनीहरुको हितग्राही खातामा जम्मा
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर लगानीकर्ताको हितग्राही खातामा जम्मा गरेको छ । कम्पनीले वि.स २०७८ माघ २० गतेसम्म कायम साविकका सेयरधनीहरुका लागि १०ः३ अनुपातमा जारी गरिएको हकप्रद सेयरधनीहरुको हितग्राही खातामा जम्मा गरेको हो । कम्पनीले गत २०७८ माघ २० गतेसम्म अभौतिकीकरण गराएका सेयरधनीहरुको हकप्रद...